တစ်ကယ်ဆို…. (သက်ထွေး) | PoemsCorner
တောင်းဆို တတ်တဲ့အရာတစ်ခုဆိုတာ …
ငါကိုယ်တိုင်တောင်မှ မခိုလှုံသင့်ဘူး ။ ။
ငါတို့ အိပ်မက်တွေ မက်ခဲ့ကြတာ …
မအေးခဲသွားခဲ့ဘူး ။ ။
ဟိုး … ချောင်းကြည့်နေတဲ့
ဇန်နဝါရီလ ၄ရက် ညနေ ၅း၁၁ ၂ဝဝ၈
In: ကဗျာ Posted By: Thet Twe Date: May 21, 2010
၀င်ရိုးစွန်းဆီမှ နွေဦးပေါက်ည (သက်ထွေး)
အကြွင်းမဲ့ ကြိုတင်ကြံစည်မှု (သက်ထွေး)
Leave comment9Comments & 885 views
By: အမရာ at May 21, 2010
ကိုယ့်လူကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပါပြီ…။ ကျုပ်တောင် အချစ် ကဗျာတွေဖက်ပြန်တူးဖော်ချင်လာပြီဗျ..။
ခင်ဗျား ကဗျာတိုင်း စောင့်ဖတ်လျက်ပါ..။
By: Angwei at May 21, 2010
ကျေးဇူးပါ။ ဒါ ကျွန်တော့်ကဗျာဟောင်းတွေခင်ဗျ။ ကျွန်တော်တော့ ဖတ်ပြီး သိပ် အကြိုက်မတွေ့လှဘူး။ အနုပညာ လောဘထင်ပါရဲ့ဗျာ။ ဘယ်တော့မှ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အားရတယ်လို့မရှိဘူး။ အခုလို အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။ အကို့ကဗျာတွေလဲ အမှန်အကန် ကောင်းပါတယ်။ အားပေးလျှက်ပါ။
By: Thet Twe at May 21, 2010
အရင်က တင်ရတာနဲနဲခက်လို. မ၀င်တာ
By: naynyo23 at Jun 17, 2010
အားပေးတာကျေးဇူးဗျ။ ကျွန်တော် ဒီနေ့ကဗျာအသစ်တစ်ပုဒ်ရေးထားတယ်။ ညကျတင်မယ်ဗျ။ အားရင် လာအားပေးဦး။ ပြီးတော့ ကျွန်တော် ၂ဝ၁ဝ မှ နောက်ဆုံးရေးထားတဲ့ ကဗျာနှစ်ပုဒ်က မနက်ဖြန်ရဲ့ လက်ကျန် နဲ့ တိမ်းစောင်းရင်း ရိုးသားခြင်း ။ အဲဒါတွေ အကိုဖတ်ပြီးသွားပြီ မဟုတ်လား။ ကျွန်တော်ညကျရင် ကဗျာအချောသတ်ပြီး တင်လိုက်မယ်ဗျ။ အကိုလည်း အကို့ကဗျာဟောင်းတွေ တင်ဦး။ ကျွန်တော် အခုတင်ထားတာတွေ အကုန်ဖတ်ပြီးသွားပြီ။
By: သက်ထွေး at Jun 17, 2010
အစ်ကို့ရဲ.မနက်ဖြန်ရဲ့လက်ကျန်နဲ့ တိမ်းစောင်းခြင်းရိုးသားခြင်းတွေလဲ ဖတ်
ကိုနေညိုရေ .. တင်သာတယ်။ အားပေးဖို့က စောင့်နေတာ။ အင်းဗျ ကျွန်တော်လည်း တင်မယ်။ တင်ပြီးသွားရင် အကြောင်းကြားလိုက်မယ်ဗျ။ ကျွန်တော့်ကဗျာတွေ ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်တော့ ကျေးဇူးဗျာ။ ကျွန်တော့်အတွက် အားတွေပါပဲ။
တစ်ကယ်ဆို … ဒီကဗျာလေးက အတည်ကို အများကြီးကောင်းတယ်..
cellent cellent excellent …. (:
By: ဖြိုးဖြိုး at Apr 24, 2011